के मंगल ग्रहमा एलियनहरुको ढोकामा पुगेको हो नासाको रोभर ? - Technology Khabar
» ताजा समाचार » के मंगल ग्रहमा एलियनहरुको ढोकामा पुगेको हो नासाको रोभर ?
के मंगल ग्रहमा एलियनहरुको ढोकामा पुगेको हो नासाको रोभर ?
Technology Khabar ३१ बैशाख २०७९, शनिबार
विगत केही दशकदेखि मंगल ग्रहमा एलियन्सको उपस्थितिको चर्चा भइरहेको छ। तर, यदि रातो ग्रहमा यस्तो केही भेटिएको छ भने पक्कै पनि पृथ्वीबाट त्यहाँ पठाइएका रोभरहरूले यसको संकेत पाएको हुनुपर्छ।
नासाको क्युरियोसिटी रोभर मंगल ग्रहमा केही गोप्य जानकारीको खोजीमा रहेको देखिन्छ। यसले पृथ्वीका वैज्ञानिकहरूलाई मंगल ग्रहबाट निरन्तर तस्बिरहरू पठाइरहन्छ र यस्तै एउटा तस्विरमा ग्रहको चट्टानी क्षेत्रहरूमा केही विशेष देखिन्छ।
तस्विर हेर्दा क्युरियोसिटी रोभर मंगल ग्रहको चट्टान बीचको एउटा ढोकामा पुगेको देखिन्छ। यो के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। के यो मंगल ग्रहमा एलियनहरूको उपस्थितिसँग सम्बन्धित छ ? वा के मंगल ग्रहमा साँच्चिकै एलियनहरु छन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यो तस्बिर नासाको मार्स रोभर ‘क्युरियोसिटी’ मा जोडिएको मास्टक्यामबाट मे ७ तारिखमा लिइएको हो। यसले ग्रहको भौगोलिक विशेषतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसलाई ग्रीनह्यू पेडिमेंट (Greenheugh Pediment) भनिन्छ।
तस्विर हेर्दा, कसैले विश्वास गर्न सक्छ कि यो मंगल ग्रहमा रहेको गोप्य गुफाको प्रवेशद्वार हो वा सुरुङको सुरुवात हो, जुन भित्र टाढासम्म जान्छ। यद्यपि यो कुरा सत्यबाट टाढा छ।
एक रिपोर्टका अनुसार मंगल ग्रहको चट्टानमा देखिएको यो ढोकाजस्तो ‘ओपनिङ्ग’ भ्रामक हुन सक्छ। कतिपयले यसलाई प्रवेशद्वारको रूपमा सोच्न सक्छन्, तर यो चट्टानहरू बीचको खाडल हो, जुन केही सेन्टिमिटर चौडा हुन सक्छ। विशेष कुरा यो हो कि तस्विरले त्यो वस्तुको साइजको बारेमा पूर्ण जानकारी दिँदैन।
शुरुवातीमा तस्विर र यो क्याप्चर गरिएको भूवैज्ञानिक विशेषता एक वा दुई विज्ञान कथाको चलचित्र प्रेरित गर्न पर्याप्त देखिन्छ।
रेडिट प्रयोगकर्ताहरूले यो तस्वीर हेरेपछि धेरै अनुमान लगाएका थिए जसले निकै चर्चा पायो । चट्टानहरूमा यस्तो आकार भूकम्पको कारणले पनि हुन सक्छ, जसले चट्टानमा दबाब दिन्छ र यसलाई भाँच्दछ। यो मात्रै भाँचिएको होइन। तस्विरको वरिपरि हेर्दा, धेरै फ्र्याक्‍चरहरू देखिन्छन्।
नासाको क्युरियोसिटी रोभरले यस ग्रहको बारेमा हरेक दिन नयाँ जानकारी दिइरहेको छ। केही अनौठो तस्बिरहरू बाहेक, यो रोभरले धेरै प्रकारका परीक्षणहरू पनि गरिरहेको छ।
केही महिना अघि, क्युरियोसिटी रोभरले मंगल ग्रहमा कार्बन सिग्नेचर पत्ता लगाएको थियो, यद्यपि यो अहिलेसम्म प्रमाणित हुन सकेको छैन कि त्यहाँ कुनै समय एक पटक जीवन थियो। यति हुँदाहुँदै पनि सम्भावना बढेको छ।
अहिले यो रोभरले मंगल ग्रहको सतहबाट आफ्नो नमूना सङ्कलन गरिरहेको छ। यी धेरै नमूनाहरूको अनुसन्धानमा, वैज्ञानिकहरूले थाहा पाएका छन् कि केही नमूनाहरूले यस ग्रहमा जीवनको संकेत गर्दछ। यद्यपि, यो लामो अनुसन्धानको विषय हो, जसलाई थप ठोस प्रमाण चाहिन्छ।
प्रकाशित: ३१ बैशाख २०७९, शनिबार
चीप डिजाइनर एआरएमले ह्वावेलाई निरन्तर प्रविधि उपलब्ध गराउने
किशोरी र महिलालाई डिजिटल साक्षरता प्रदान गर्न ’स्मार्ट छोरी’ अभियान
ब्ल्याक फ्राईडेमा ७.४ अर्ब डलरको अनलाईन किनमेल, २.९ अर्ब डलर स्मार्टफोन किन्नका लागि खर्च